ဘရာဇီးသို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးများ - ရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့်ခရီးစဉ်အတွက်ပျော်ရွှင်မှု ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | 28/05/2021 10:40 | Brasil, အကြံပေးချက်များ
ဘရာဇီးကိုသွားဖို့ကာကွယ်ဆေးတွေအကြောင်းပြောတာကအဲဒါကိုလုပ်တာပဲ consejosတာဝန်ဝတ္တရား၏မဟုတ်။ ဆိုလိုသည်မှာဘရာဇီးအစိုးရသည်မည်သည့်ကာကွယ်ဆေးအမျိုးအစားကိုမျှမြန်မာနိုင်ငံသို့ ၀ င်ရောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ကူးစက်ရောဂါကနေဆင်းသက်လာလိုအပ်ချက်မှလွဲ။ (ဤတွင်အပေါ်ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ် တစ်နိုင်ငံလုံးကဒီစံချိန်စံညွှန်း), ရီယိုဒီဂျနေရိုနယ်မြေများသို့သွားရောက်ရန်တရားဝင်သန့်ရှင်းသောအခြေအနေများမရှိပါ.
သို့သော်ဘရာဇီးသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ပဉ္စမအကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကြောင်းသတိရသင့်သည်။ ၎င်းမှာစတုရန်းကီလိုမီတာရှစ်သန်းကျော်ရှိပြီးရာသီဥတုနှင့်ပထဝီဝင်ဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုများစွာပါ ၀ င်သည်။ ဒါကြောင့်အလွန်အမင်းကြောင်းအကြံပြုသည် ဘရာဇီးသို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးအချို့ကိုလက်ခံရရှိသည်သငျသညျအခြို့သောဒေသများသို့ ဦး တည်နေကြသည်အထူးသဖြင့်လျှင်။
1 ဘရာဇီးသို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးများ၊ ထောက်ခံချက်တစ်ခုထက်ပိုသည်
1.3 အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ) ကာကွယ်ဆေး
1.4 အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ) ကာကွယ်ဆေး
1.5 MMR ကာကွယ်ဆေး
ကျနော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲတောင်အမေရိကနိုင်ငံဟာကြီးမားတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါ အမေဇုံ။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင်အနေဖြင့် အကယ်၍ သင်အနေဖြင့် အကယ်၍ သင်သွားလိုလျှင်ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးတည်းကိုမလိုအပ်ပါ Rio de Janeiro မြို့, ဥပမာ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်သွားရောက်လည်ပတ်သည့်နယ်မြေများမည်သို့ပင်ရှိပါစေ၊ အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။ ပြီးတော့ဘယ်သူမှသင့်ကိုမထိခိုက်စေတော့ပါဘူး အန္တရာယ်ရှိသောရောဂါများ၏အန္တရာယ်ကိုရှောင်ရှား။ သင်သည်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ရန်ရက်ချိန်းယူနိုင်သည် နိုင်ငံတကာကာကွယ်ဆေးထိုးရေးစင်တာများ စပိန်၏နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ဒီ link ကို။ သို့သော်နောက်ထပ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုမရှိဘဲနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုသည့်ဘရာဇီးလ်သို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်းကိုသင်ပြောပါမည်။
ကြောက်လန့်နေသော Aedes aegypti၊ အဝါရောင်အဖျားရောဂါဖြစ်ရခြင်း
ဤသည်သည်တောင်အမေရိကနိုင်ငံတွင်ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသောရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မကြာသေးမီအချိန်အထိအာဏာပိုင်များကတိုင်းပြည်သို့မဝင်မီကာကွယ်ဆေးထိုးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ အဝါရောင်အဖျားသည်ခြင်များမှကူးစက်သောကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်သည်။ Aedes aegyptiထို့အပြင် mummy ခြင်ကိုခေါ်။
ဒီအင်းဆက်ပိုးလည်းကူးစက် သွေးလွန်တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေးမရှိပါက ပို၍ အန္တရာယ်ရှိသည်။ သို့သော်အဝါရောင်အဖျားပြန်သွားသည့်အခါ၎င်း၏ရောဂါလက္ခဏာများမှာအဖျားတက်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းနှင့်နောက်ကျောနာကျင်ခြင်း၊ ပျို့အန်ခြင်းနှင့်အန်ခြင်းဖြစ်သည်။ အချိန်မီမကုသပါကလူနာသည်စတင်ဖွံ့ဖြိုးလာသည် အသားဝါ (ဤအရပ်မှ adjective နာမဝိသေသန) နှင့်သွေးသွန်ခံစားနေရပြီး။ ဤဒုတိယအဆင့်သည်သေဆုံးမှု၏ ၅၀% ကိုဖော်ပြသည်။
ထို့ကြောင့်၎င်းသည်အလွန်လေးနက်သောရောဂါဖြစ်သည်။ ကာကွယ်ဆေးထိုးရန်မတတ်နိုင်ပါကဘရာဇီးကိုသွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့အကြံဥာဏ်သည် ပို၍ နွေးထွေးစေရန်အမြဲပြုလုပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အမေဇုန်သို့သင်လာလျှင်ဤကာကွယ်ဆေးသည်သင့်အားအထက်ဖော်ပြပါဆန့်ကျင်မှုကိုမကာကွယ်ကြောင်းသတိရပါ သွေးလွန်တုပ်ကွေး။ ထို့ကြောင့်အင်္ကျီရှည်ဝတ်။ ခိုင်ခံ့သောခြင်ဆေးကိုသုံးပါ။
ယခင်ရောဂါနှင့်မတူဘဲဘက်တီးရီးယားများ၌ဤရောဂါခံစားခဲ့ရသည် Clostridium tetani အနာကိုကူးစက်။ အထူးသဖြင့်ဘရာဇီးနိုင်ငံရှိတောရိုင်းဒေသများသို့သင်သွားလျှင်၎င်းကိုအလွယ်တကူထုတ်လုပ်နိုင်သည်။ ထို့အပြင်အထက်ပါဘက်တီးရီးယားများကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြောင်းသင်သတိရပါ မဆိုညစ်ညမ်းမျက်နှာပြင်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည်ဓာတ်တိုးသောသတ္တုများတွင်အများဆုံးတွေ့ရသည်
ထို့ကြောင့်သူမနှင့်တွေ့ဆုံရန်မလွယ်ကူပါ။ အလှည့်၌, clostridium ထုတ်ပေး neurotoxins ကြောင်းတစ်ခုလုံးကိုအာရုံကြောစနစ်အကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ၎င်း၏အဓိကလက္ခဏာများမှာချောင်းဆိုးခြင်း၊ ကြွက်သားများကျုံ့ခြင်း၊ တောင့်တင်းခြင်းနှင့်သွက်ချာပါဒပင်ဖြစ်သည်။ သူတို့ဟာအဖျားတက်တာ၊ ချွေးထွက်တာတွေ၊
၎င်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသောဆင်းရဲဒုက္ခများအပြင်အချိန်မီမကုသပါကသေစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယခင်ကသင့်အားအကြံပေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ဤရောဂါကိုကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသင်ဘာမျှမဆုံးရှုံးပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ မေးခိုင်ကာကွယ်ဆေးသည်များသောအားဖြင့်ကာကွယ်ဆေးများပါဝင်သည် ဆုံဆို့ နှင့် ကြက်ညှာချောင်းဆိုးဘရာဇီးကိုသွားဖို့လည်းအကြံပေးတယ်။ ပထမတစ်ခုမှာပါးစပ်မှကူးစက်သောအထူးသဖြင့်ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းမှကူးစက်သောရောဂါဖြစ်သည်။ ခေါ်ဆိုမှုကြောင့်ဖြစ်တယ် Klebs-Löffler bacillus ၎င်းသည်ကလေးငယ်များအထူးသဖြင့်လေးနက်နိုင်သည်။
ကြက်ညှာချောင်းဆိုးနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းသည်ဘက်တီးရီးယားများကြောင့်ဖြစ်သောကူးစက်တတ်သောအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလည်းဖြစ်သည် Bordetella ကြက်ညှာချောင်းဆိုး။ ၎င်းသည်သွင်ပြင်လက္ခဏာများမှာချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်အလွန်ကူးစက်တတ်သည်။ ယခင်ကလေးများကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်ကလေးငယ်များကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ သို့သော်၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးမှုများမဖြစ်ပေါ်ပါကများသောအားဖြင့်ကောင်းစွာကုသနိုင်သည်။
အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးဘီ) ကာကွယ်ဆေး
၎င်းသည်ကူးစက်တတ်သောရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးအသည်းရောင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ၎င်းသည်အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးအေ)၊ Paramyxovirus 72 နှင့်ငါတို့သည်လည်းသင်တို့နှင့်အတူစကားပြောလိမ့်မည်သည့်တူညီသောရောဂါ၏အခြားမျိုးကွဲထက်လျော့နည်းလေးနက်သည်။
အမှန်မှာ၎င်းသည်နာတာရှည်ဖြစ်လာခြင်းသို့မဟုတ်အမြဲတမ်းအသည်းပျက်စီးခြင်းကိုဖြစ်စေသည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းကိုကူးစက်သောကြောင့်၎င်းကိုအလွယ်တကူကန်ထရိုက်နိုင်သည် ညစ်ညမ်းသောအစားအစာသို့မဟုတ်ရေမစင်ကြယ်သောမျက်နှာပြင်များမှတဆင့်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏လက်များကိုမကြာခဏဆေးကြောရန်သင့်အားအကြံပေးသည်။ coronavirus ကြောင့်သင့်အားအကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။
ထို့အပြင်၊ အကယ်၍ အသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးအေ) အားကာကွယ်ဆေးထိုးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။ ၎င်းသည်ခြောက်လခြား။ နှစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ဆေးထိုးပါ။ ဘရာဇီးသို့သွားရန်အဆင်ပြေသောကြောင့်ကာကွယ်ဆေးကိုအချိန်မီခံရန်သင်စဉ်းစားသင့်သည်။ အဲဒါပြီးပြီဆိုရင်၊ မင်းတို့ပြောသလိုခြောက်လလိုအပ်တယ်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤရောဂါအကြောင်းကိုအသည်းရောင်ရောဂါ (ပိုးအေ) အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်တူညီသောအရာကိုပြောနိုင်ပါသည်။ သို့သော်ပုံစံ B သည်ဖြစ်ပါသည် ပိုမိုအန္တရာယ်များသောက generate နိုင်ပါတယ်ကတည်းက နာတာရှည်ရောဂါကူးစက် ထို့အပြင်၎င်းသည်အသည်းပျက်ခြင်း၊ အသည်းခြောက်ခြင်းသို့မဟုတ်အသည်းကင်ဆာသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။
သို့သော်များသောအားဖြင့်၎င်းသည်မလေးနက်ပါ။ သို့သော်ရောဂါကူးစက်ခံရသည့် အချိန်မှစ၍ ရောဂါလက္ခဏာများပေါ်ထွက်လာရန် ၄ လခန့်ကြာနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကမှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်အရည်။ ဥပမာ - သွေးသို့မဟုတ်သုတ်ရည်၊ ချောင်းဆိုးခြင်းသို့မဟုတ်နှာချေခြင်းမှမဟုတ်ပါ။
ထို့အပြင်အခြားရောဂါများနှင့်မတူဘဲအသည်းရောင်အသားဝါ B ပိုးသည်နာတာရှည်ရောဂါဖြစ်လာသည် လူငယ်များ ဗိုလ်ကြီးထက်။ ထို့ကြောင့်ဘရာဇီးသို့မသွားမီကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်, antigen ခြောက်လကြားကာလနှင့်အတူအုပ်ချုပ်, နှစ်ခုသို့မဟုတ်သုံးခုဆေးများပါဝင်သည်။
MMR ကာကွယ်ဆေးကိုထိုးနေသောကလေးတစ် ဦး
ဤသည်မှာထိုကဲ့သို့သောရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်ပေးသောနာမည်ဖြစ်သည် ဝက်သက်၊ ဂျိုက်သိုးနှင့်ပါးချိတ်ရောင်။ ပထမတစ်ခုမှာ exanthematic အမျိုးအစားကူးစက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအရေပြားပေါ်တွင်အနီရောင်အဖုများဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ အထူးသဖြင့်မိသားစုမှဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောရောဂါဖြစ်သည်။ paramyxoviridae။ ဤရောဂါ၏နောက်ထပ်လက္ခဏာတစ်ခုမှာချောင်းဆိုးခြင်းနှင့်၎င်းသည် ဦး နှောက်ကိုလောင်ကျွမ်းပါက၎င်းသည်အလွန်ကြီးလေးသောဖြစ်နိုင်သည်။
ယင်းကြောင့် ဂျိုက်သိုး၎င်းသည်ကူးစက်ရောဂါတစ်ခုဖြစ်ပြီးအရေပြားအဖုအပိန့်များထွက်လာပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ကမှတဆင့်ကူးစက်သောဖြစ်ပါတယ် လေ ၎င်းကိုပြသရန်ငါးရက်မှခုနစ်ရက်ကြာမြင့်သော်လည်းယင်းသည်အလွန်ကူးစက်တတ်သည်။ သို့သော်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများမှအပ၎င်းသည်မလေးနက်ပါ။ ၎င်းတွင်သန္ဓေသားကိုထာဝရပျက်စီးစေနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင် parotitis ၎င်းသည်ဘုံရောဂါလည်းဖြစ်သည်။ သူ့နာမည်ကသင့်အတွက်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်မည်မဟုတ်ချေ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကမင်းတို့ကိုမင်းပြောရင် ပါးချိတ်ရောင်သငျသညျsurelyကန်အမှန်သူတို့ကြားဖူးတယ်။ ၎င်းမှကူးစက်သည် ပါးချိတ်ရောင်ဘက်တီးရီးယားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့မူကွဲလည်းရှိသော်လည်း။ ဒါဟာနေသမျှကာလပတ်လုံးကကုသနေသမျှကာလပတ်လုံးလေးနက်ရောဂါမဟုတ်ပါဘူး။ မဟုတ်ရင်နှင့်အစွန်းရောက်သောအခြေအနေများတွင်အမျိုးသားများတွင် meningitis, pancreatitis သို့မဟုတ်မျိုးမပွားနိုင်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
MMR ကာကွယ်ဆေးသည်ဤရောဂါများအားလုံးကိုကာကွယ်ပြီး ၄ ပတ်ခြားခြား။ နှစ်ကြိမ်ထိုးသည်။
သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့ပြီးသောအရာများသည်အထူးကုများအကြံပြုသောဘရာဇီးသို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးများဖြစ်သည်။ သင်လုပ်ရန်သွားလျှင်၎င်းတို့အားထားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပေးပါသည်။ ထို့အပြင်သင်၏ကျန်းမာရေးအတွက်အန္တရာယ်မရှိစေရန်သင်၏ခရီးတွင်အခြားကြိုတင်ကာကွယ်မှုများပြုလုပ်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းသည်သင်စာရင်းသွင်းရန်ဖြစ်သည် ခရီးသွားများမှတ်ပုံတင်ခြင်း နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာနနှင့် \_ t ခရီးသွားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာမခံ။ စပိန်လူမှုဖူလုံရေးသည်ဘရာဇီးတွင်တရားဝင်မှုမရှိကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်သင်ဖျားနာလျှင်ကုန်ကျငွေအားလုံး သူတို့ကသင့်ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်မှာ run လိမ့်မယ်။ ထိုတွင်ဆေးရုံတက်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့်နေရပ်ပြန်ပို့ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သက်ရှိအားလုံးရေသောက်သောအခါ, သင်ကသာသောက်ရန်အကြံပြုသည် တက်ပုလင်းဘယ်တော့မှထိပုတ်သို့မဟုတ်စမ်းရေတွင်းကနေ။ အလားတူစွာသင်စားသောသစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသည်လည်းဖြစ်သင့်သည် ကောင်းစွာဆေးကြောခြင်းနှင့်ပိုးသန့်ဆေး.
ကမ်းခြေနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့သည်မညစ်ညမ်းအောင်သေချာပါစေ။ On Sao Paulo y စန်တာ Catarina ရေချိုးတားမြစ်သည်ရှိရာအတော်လေးရှိပါတယ်။ နှင့်ဆေးဝါးအဘို့, သူတို့ကိုစပိန်မှယူပါ သူတို့ထဲကအပြေးရှောင်ရှားရန်။ သို့သော်သူတို့ရောက်ရှိချိန်တွင်သူတို့သည်သင့်အားလေဆိပ်၌စစ်ဆေးနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ သင်စာရွက်ကိုယူဆောင်လာသည်ကိုမှန်ကန်ကြောင်းသက်သေပြသည့်စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုကိုလည်းယူဆောင်လာရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုပါသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်၌သံသယများရှိပါက၊ နိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ် သင်ဆဲတွေးမိသမျှကိုရှင်းလင်းရန်။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်၊ ဘရာဇီးသို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးများ ကျွမ်းကျင်သူများကအကြံပြုသည်။ အဘယ်သူမျှမဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်, ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအပေါ်ထားရန်သင့်အားအကြံပေး။ အကယ်၍ သင့်မှာသံသယရှိနေသေးလျှင်သင်နှင့်တိုင်ပင်သင့်သည် သင့်ဆရာဝန်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်လုံခြုံစွာခရီးသွားနိုင်ပြီးနေထိုင်ပါလိမ့်မည် ထူးခြားသောအတှေ့အကွုံ မည်သည့်ရောဂါကမျှသင့်ကိုမပျက်စီးစေနိုင်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » အမေရိကတိုက် » Brasil » ဘရာဇီးသို့သွားရန်ကာကွယ်ဆေးများ